Tale jeneralin’ny Bianco : Mpanao kolikoly ? -
AccueilRaharaham-pirenenaTale jeneralin’ny Bianco : Mpanao kolikoly ?
Mihazakazaka manokatra fanadihadiana hatrany ny Bianco raha vao misy fitoriana na fitarainana voarainy ka mahakasika ny fitondram-panjakana na ireo mpanao politika akaikin’ny mpitondra. Tsy vitan’ny manokatra fanadihadiana fa manao valandresaka an-gazety, ary mazàna efa tena fiampangana mihitsy no ambaran’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Bianco ankoatra ny famoahana tsimbaratelon’ny famotorana. Mipetraka noho izany ny fanontaniana manao hoe: « azo henjehina ho manao kolikoly ve ny tale jeneralin’ny Bianco? ».
Ialàna tsiny raha mampiasa teny vahiny, satria tsy dia misy voambolana malagasy azo andikana ny hoe « favoritisme ». Raha mijery ny andininy faha- 175.2 amin’ny lalàna vaovao laharana 2004-030 tamin’ny 09 Septambra 2004 dia azo atao tsara tokoa ny manenjika ny tale jeneralin’ny Bianco ho manao « favoritisme ». Haka ohatra avy hatrany isika hilazana fa misy ny mizàna mitanila ataon’ny tale jeneralin’ny Bianco amin’ity resaka ady amin’ny kolikoly ity. Voalohany ny raharaha Claudine, izay nanaovan’ny Bianco valandresaka an-gazety maro, namoahana tsiambaratelon’ny famotorana mihitsy aza raha tsy hiresaka afa-tsy ireny horonam-peo niparitaka tany amin’ny tambazotra sy ny facebook ireny.
Izao indray koa dia niteny tamin’ny hainoamanjery mihitsy ny tale jeneralin’ny Bianco fa hanokatra fanadihadiana amin’ireo solombavambahoaka ampangaina ho nanao kolikoly tao amin’ny antenimieram-pirenena. Izany hoe, eo no ho eo ny fandraisana andraikitry ny Bianco raha vao mikasika olona ao anaty fitondrana na mpanao politika miara-miasa amin’ny mpitondra, ary mampiasa ny hainoamanjery amin’ny hetsika ataony.
Etsy an-danin’izany anefa, mangiana tsy miloa-bava ary toa tsy mihetsika akory ny tale jeneralin’ny Bianco rehefa mpanao politika avy amin’ny fanoherana no misy mitory amina resaka kolikoly, ohatra amin’izany ireo fitoriana indroa nisesy nataon’ny mpanolotsain’ny tanànan’Antananarivo, Lalatiana Ravololomanana. Mba niandry izay fanambarana avy amin’ny tale jeneralin’ny Bianco ihany ny mpanara-baovao sy ny mpanao gazety saingy… Toraka izany koa ny fitoriana momba an’i Mamy Ravatomanga amin’ny orinasa JIRAMA. Tsy nandrenesan-teny mihitsy izany Bianco izany momba io raharaha io, nafenina mihitsy raha ny marina.
Moa va tsy “favoritisme” no azo iantsoana izany fihetsiky ny tale jeneralin’ny Bianco, ary ny lalàna dia milaza mazava tsara fa endrika kolikoly ny “favoritisme”, sazy an-tranomaizina telo volana hatramin’ny herintaona miampy fandoavana lamandy 1 000 000 hatramin’ny 20 000 000 fmg. Tsy vitan’ny hoe azo enjehina fotsiny fa tena goavana kokoa mihoatra amin’ny hafa, io ilay antsoina hoe « circonstance aggravante » satria ny Bianco manana fahefana manokana natao hanenjika izay rehetra manao ny antsoina hoe « favoritisme » no manao io fandikan-dalàna enjehin’ny lalàna io.
Tsy mijanona fotsiny eo amin’ny resaka « favoritisme » ny hetsika ataon’ny tale jeneralin’ny Bianco fa miroso any amin’ny fanakorontanana saim-bahoaka mihitsy, araka ny efa nambara tetsy ambony ny raharaha Claudine. Tsy vitan’izany, adidin’ny Bianco ny miaro ny loharanom-baovao, ny vavolombelona ary indrindra ny tsiambaratelon’ny famotorana. Marina fa nanao valandresaka an-gazety niezaka niaro tena mafy ny Bianco sy ny tale jeneraliny tamin’ilay horonam-peo nivoaka tany amin’ny facebook sy ny tambazotra mikasika ny raharaha Claudine, fa aiza ny porofo manamarina fa tsy ny Bianco marina tokoa no namoaka iny? Ndeha atao aza hoe tsy avy tao amin’ny Bianco ilay horonam-peo, koa nahoana no tsy nanokatra fanadihadiana nahafahana nisambotra izay namoaka iny tsiambaratelon’ny famotorana iny ny Bianco? Mbola « favoritisme » daholo izany rehetra, endrika kolikoly enjehin’ny lalàna manan-kery eto amin’ny tany sy ny fanjakana.
Efa diso tafahoatra loatra ny isan’ireo “bar” na ireo mpivarotra zava-pisotro misy alikaola eto an-drenivohitra kanefa maro amin’izy ireo no tsy ara-dalàna. Tafiditra ao anatin’izay tsy fanarahan-dalàna izay, ohatra, ireo mpivarotra toaka tsy manana taratasy ...Tohiny